Abaningi baye baba kangangokuthi ngenxa lithathelwe izinguquko zangaphakathi nezangaphandle, indlela yokuthuthukisa isu ngempumelelo ukufeza imigomo siswele impela kancane. Othile ayeliqamba ukuntula inhlanhla. Noma mhlawumbe omunye umbuzo? Synergy - iyona impendulo yalo mbuzo. Kodwa kuyini na? Synergy - kusho ukuthini?
Ingqikithi Synergy kanye nendzima yayo
, Cabangela leli thuluzi isicelo kuyadingeka ngombono isayensi imfundiso yokuziphendukela zokuphila kwanamuhla, emnothweni, ibhizinisi kanye nobuchwepheshe. Namaqiniso ukukhombisa khona wesimo ezindaweni ezahlukene: kwezombusazwe, ubuciko, ngesimiso semvelo, nokunye. Nokho, izinkinga ezinjalo kungaba kuwo womabili la mazwe asathuthuka nalawo asethuthukile. Izinkinga kancane ekuqaleni sisakazekele ezindaweni ezintsha, ezuza izici uhlelo. Synergy - umbono abasha yesayensi, ibheka nezinkinga zezinkinga causality kanye nezibhelu ezilandela lokhu.
Umlando lasungulwa futhi Synergy
Synergy - kuyini? Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi igama lesiGreki elisho ukuthi "nobumbano." Umlando waleli isiyalo owaqala ekhulwini lamashumi amabili. iqembu laseBelgium ososayensi eholwa Nikolaev futhi Rogozhin wabukela ezinye inqubo yamakhemikhali futhi wathola amaphethini ezithakazelisayo ukuziphatha izinhlelo eziyinkimbinkimbi futhi izakhiwo kanye nezici ezithile ukuze noma kunezinxushunxushu imvelo bangaphandle zangaphakathi. Kwaphawulwa isifiso sokuthutha esigabeni esisha yokuziphendukela kwemvelo kohlelo ngokusebenzisa eyinkimbinkimbi yokulandelana kwayo ngokohlu. Synergy - kungcono i isayensi ngqo, okuyinto waqala ukusakaza ngokuhamba kwesikhathi cishe zonke izici zokuphila yesimanje.
Imodeli Synergetic zomhlaba
Synergy - kungcono into yangempela ongazange kuphela lasakazekela ezicini eziningi zokuphila, kodwa futhi wadala incazelo yamandla-ulwazi zezwe. Imininingwane namandla, okuhlanganiswayo ekuhlinzekweni isimo senhlalo, ubuntu kanye yemvelo, lemali ekuphileni. Synergy isimiso - mqondo eziyisisekelo yamafilosofi, waphetha eziningi ezizathwini.
Basics ulwazi synergistic
Umhlaba - uhlelo okusho Fractal, futhi wonke ngesikhathi esifanayo futhi esakhiwa i number pheze esingapheliyo kuncikene futhi ezihlobene izinhlelo avaliwe futhi evulekile. Uma thina uhlukanise uhlelo zibe isibalo esingapheliyo izakhi, bonke ngothi lwabo uyayifaka uhlamvu Fractal noma holographic. Synergy - umbono yesayensi, postulates ukuthi yikuphi ukwaziswa okugcinwe kwi ngesinye sezinqumo, liqukethe ulwazi mayelana nazo nezinye izenzakalo ezihlobene. Ngaphezu kwalokho, uma uguqula ngesinye sezinqumo izakhiwo ukushintsha kanye nezinye ezihambisana.
Izakhiwo ebese izinhlelo
Synergy - yilokho kulandela kusukela eziyisisekelo izici uhlelo, ezifana ukusebenza, nezimo nokuqinisela. Zonke izici ezifanayo ube esiyingqayizivele amandla nekhono, okuyizinto ezibangela lonke uhlelo e esimweni unomphela ushintsho. Isibonelo, uma senza nje umuntu njengoba uhlelo organic, ezifana ukusebenza izakhiwo zalo lokubonakala ukunamathela engaguquki ukuze ikusasa labo siqu. Ukusebenza kulokhu e inqubo yokuthuthukisa amakhono ehlukile yayo siqu. Nezimo efanayo impahla wesithathu, kwakha isimiso esiyinkimbinkimbi, kwenza ezinye izakhi zalo ephila ngokuvumelana nalo bazenzela nezwe elingaphandle.
Synergetics futhi Synergy - abayikho sinye siyafanana?
Ake sicabangele esinye lwempikiswano ebalulekile. Synergy - kusho ukuthini? Ingabe lokhu mqondo nsé amazwi anjengokuthi "Synergy"? A impendulo ecacile yalo mbuzo kunzima. Kunoma ikuphi kuhlobene futhi ezihambisana imiqondo eyaba okhokho enkulu nohlaka lomqondo amaningi izici ukhiye besayensi yanamuhla. Lokhu Paradigm Synergetic kanye nomqondo Synergetic yolwazi nokuqonda yokuphila, nokuthula, futhi indlela synergistic nezindlela synergistic. Ngokuya imiqondo le, ososayensi yesimanje ukuchaza ukuziphatha izinhlelo ezahlukene. Ngakolunye uhlangothi, esiwusizo kanye theory imodeli Synergy kwasakazekela kubantu yonke imikhakha yempilo, kungaba kwabantu, Psychology noma ibhizinisi, okungukuthi, incazelo yaleli gama abstract kakhulu. Kodwa Synergy - kunalokho, kuba umqondo esuselwe eliqondisela isayensi ethile.
Synergy - kuyini? Lona amandla noma amandla lapho ekhiqizwa ezingxenyeni ezahlukene inqubo umsebenzi wabo ngokuhlanganyela. Kwezamabhizinisi, isibonelo, leli gama kungenziwa ngokuthi inzuzo etholakala ngokuhlanganisa izakhi eziningana ngendlela yokuthi kahle kwabo kulesi simo kungaba ephakeme kunaleyo sum yabo. Kusukela leli gama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi "nokubambisana, nobumbano", "Ukuxhumana". Zonke lezi zincazelo abonisa ngokunembile ukunikezelana imininingwane ukusetshenziswa Synergy kuzo zonke izici zokuphila. Ukuthandwa leli gama emagameni izikole zemfundo, amajenali, izikhungo zocwaningo, amabhange kanye corporations ngenxa yokuthi ubudlelwano phakathi ukusebenza, nezimo nokuqinisela, okungukuthi umthetho eyisisekelo Synergy - nsuku eyisisekelo yokuphila khona nokuthuthukiswa engasekelwe ohlelweni oluthile, izizathu ezithinta ngqo ngempumelelo project.
Synergy - umqondo ukuthi sekuyinkinga isidali isayensi entsha ngombono, okuyinto has amathuba cishe angenamkhawulo for isicelo salo ekuphileni. Lesi sici kuye kwaba ulwazi lwesayensi ukuthi izifundo izinqubo self-yesondlo, ukubukeka, ukuzinza nokudilizwa kwemizi izinhlelo (izakhiwo) bemvelo ezahlukene usebenzisa izindlela physics kanye mathematics. indlela Synergetic isetshenziswa ukutadisha inethiwekhi akusenjalo Imininingwane isikhala.
ulwazi synergistic Ikakhulukazi
Ngokungafani wesayensi eziningi ezintsha ukuthi kuphakama ezimpambanweni zomgwaqo eziningi ezinye, pre-ekhona, Synergy kusekelwe iphuzu yangaphakathi lokuxhumana phakathi ukunyakaza ezahlukene ngalo ephambana. Yingakho Synergy kudlala indima mkhulu ngisho classical physics, i-biology, i-chemistry kanye mathematics. It lingahunyushwa baphetha ukuthi entsha isayensi abasha - iqoqo amasu ezizama ukuchaza kuwukuphikisana ezweni lanamuhla futhi ubonise indlela ekufinyeleleni ubuhle kule yokuzithiba inhlangano.
Synergetics e computer science, ibhizinisi nakwezomnotho
Kuyinto lezi zici ezintathu babé izikhandle kakhudlwana ekufuneni ukusebenzisa imithetho Synergy emisebenzini yabo. Lezi zimiso anezici yabo, ehlanganisa yokuthi ngaphansi kwezimo ezithile umphumela kungaba idlule kakhulu okulindele. Kuyinto lo mphumela futhi kuyadingeka ibhizinisi, futhi umnotho, futhi ithuthuka ngokushesha ulwazi nobuchwepheshe. eseyintsha Engokoqobo Yezindaba Synergy ukuthi isayensi ngokwayo uba isici ohlelweni, okuyinto kuhlanganiswe sphere ezahlukahlukene empilweni. Ngaphezu kwalokho, lesi sijeziso kungenziwa ngokuthi futhi njengoba isixhumanisi, njengoba imithetho yayo zivumele kokubili ukuqinisa futhi kwehlise izixhumanisi osuvele ukhona.
Isakhiwo amaplanethi: eMhlabeni core, isiphuku, uqweqwe